Eyona ndawo iphambili kumbindi wembali weOviedo - I-Airbnb
Eyona ndawo iphambili kumbindi wembali weOviedo
I-wifi ekhawulezayo ye-312 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Indlu entle kwidolophu endala yaseOviedo, ethe cwaka nejongene neCampillin Park, ekhanya kakhulu nefudumeleyo. Iflethi yethu ikwenye yezona ndawo zinomtsalane zaseOviedo kunye nemarike yeFontan, icawa kunye neemyuziyam Zobugcisa Obuhle kunye Nezinto Zakudala ezikufutshane. Iflethi inekamelo elinye lokulala, igumbi lokuhlala eliyi-kitchen, igumbi lokuhlambela, i-TV, i-wifi yasimahla kunye nelaphu elingena ilanga elilungele indawo yokutyela. Isakhiwo esinelifti. Indawo yokupaka esecaleni ye € 8- € 12 ngosuku
Iflethi ithule kakhulu ibe ngexesha elinye ityeya yayo ikuvumela ukuba wonwabele ubomi bale ndawo , kufutshane kakhulu nezona zinto zinomtsalane kwesi sixeko kwaye ikufutshane kakhulu neendawo ezinomtsalane zaseOviedo ezifana nemarike ye-Fontan okanye isitalato esidumileyo seGasliday. Igumbi lokulala liqaqambe kakhulu kodwa lithe cwaka ibe linekhabhathi enkulu kunye nebhedi enkulu elala abantu ababini (150x200cm). Kwigumbi lokuhlala kukho isofa ekwayibhedi (iisentimitha eziyi-120x200) ibe ungangena kwindawo enkulu enetafile nezitulo kunye neendawo zokutyela ilanga . Ikhitshi linento yonke, isitovu se-ceramic, ifriji ye-combi, ioveni, i-microwave, i-toaster, iketile kunye nomatshini wokwenza ikofu . Into eyenza kufudumale
I-wifi ekhawulezayo – i-312 Mbps
4.92 · Izimvo eziyi-87
Iflethi yethu isemaphethelweni embindini wembali weOviedo, eyona ndawo inomtsalane yesixeko nekufutshane nepaki ye-campillin, eyenza indawo ibukeke kakuhle. Iziko lezembali yindawo enobomi obuninzi. Ngeentsasa zintle, kunye nobomi obumnandi beevenkile kunye neemarike ezenza sikwazi ukubona amasiko e-Ovetans kunye nobomi benkcubeko obunomtsalane kwiimyuziyam zayo, iMyuziyam Yobugcisa Obuhle kunye nemyuziyam yezinto zakudala, kunye nezinto ezenziwayo kwezinye iindawo (kwisikwere seentlanzi esidala, i-Palacio de la Rua, okanye i-Plaza del Umbrella ). Iibhari kunye neevenkile zokutyela zazo zonke iindidi zokutya zihlala kuzo zonke izitrato kunye nezikwere zeziko lezembali. Kwelinye icala, indawo ekuyo le flethi yenza kube lula ukungena nokuphuma e-Oviedo kwabo bafuna ukusebenzisa isixeko njengendawo yokujikeleza kwezinye iindawo ekuhlaleni ezizimeleyo
Intsapho yethu nayo ihlala eOviedo ngoko siza kukuvuyela ukukunceda ngayo nantoni na oyidingayo
Inombolo yomthetho: VUT 1499-AS
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oviedo